Akhrinta maskaxda ee internetka | La sheekayso qof nafsi ah hadda. Ka hel jidkaaga jacaylka iyo farxadda PsychicBonus.com akhristayaasha ugu sarreeya ee internetka, tarot iyo astrology. Bilow kalfadhiga wada sheekaysiga maskaxda ee bilaashka ah. Akhrinta maskaxda halkan waxay ku siin doontaa jawaabaha sida ugu macquulsan.
Akhrinta maskaxda internetka
Waxaan baadhi doonaa oo qiimeynayaa shirkadaha akhriska ee nafsiga ah si ay dadka uga caawiyaan helitaanka cilmi-nafsiga ugu fiicnaa ee la heli karo. Waxaan soo bandhigay dib u eegis ku saabsan waxa aan tixgelinayo Shirkadaha ugu sareeya ee akhrinta maskaxda ee 10 ee internetka. Waxaan kaliya oo daabici doonaa dib u eegista shirkadaha aan isticmaalo naftayda oo aan helay inaan ka soo baxo heerarka sare ee aan raadinayay. Tani waxay xajisaa dareenka. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad ka faa'iideysato cilmi-baaris ballaadhan, waxaanan ku kalsoonahay in aad ka heli doonto shirkadda sida ugu haboon baahidaada. Ku raaxayso!
Oranum waa shabakad maskaxeed oo ku cusub Mareykanka, laakiin waxay ganacsi ku lahaayeen sanado badan Poland halkaasoo lagu aasaasey. Waxay hadda ku saleysan yihiin Hangari. Waxay kaloo leeyihiin astaamo u gaar ah oo shabakadaha kale ee cilmi-nafsiga aysan soo bandhigin. Waxay bixiyaan akhrinta sheekaysiga, akhrinta emaylka iyo akhrinta kambuyuutarka. Akhrinta kamaradaha webka waa sida daawashada fiidiyow Youtube-ka, umana baahnid kambuyuutar aad adigu iska leedahay ama makarafoon si aad ula xiriirto maskaxda. Dhammaan wada xiriirka waxaa lagu dhejiyaa santuuqa sheekada ee ku lifaaqan fiidiyowga kamaradaha. Dhakhtarkaagu wuxuu si toos ah uga jawaabi doonaa shaashada. Hadaad haysatid kambuyuutar websaydh ah iyo makarafoon waxaad si toos ah ula hadli kartaa maskaxda.
Dib u eegida Websaydhada Oranum >>
AskNow wuxuu ahaa ilbidhiqsigii ugu dambeeyay ee Sayniska Maskaxda. Asknow wuxuu ganacsi ku jiray tan iyo 1995, waana mid ka mid ah shabakadaha maskaxda ee maskaxda ku jira ee ganacsiga. AskNow wuxuu ka mid yahay shabakadaha ugu horreeya ee maskaxda ee bixiya akhristayaasha internetka, oo shaqaaleysiiya qaar ka mid ah akhristayaasha maskaxda ee ugu fiican dalka. Waxay bixiyaan taleefanka iyo akhrinta sheekooyinka labadaba, waxayna leeyihiin cilmi-nafsi oo akhrin kara Isbanishka. Tani waa wax aan lahayn shabakad kale oo cilmi nafsi ah. Siciradooda waxay ahaayeen kuwo macquul ah guud ahaan, iyo websitekoodu si sahlan ayuu u isticmaali lahaa.
Dib-u-eegida Websaydhka Weydiiso AskNow >>
Life Reader waa adeeg caan ku ah maskaxda, Australia, New Zealand iyo Boqortooyada Midowday. Dhawaan waxay bilaabeen inay ku bixiyaan akhriska maskaxda xagga Mareykanka! Xulashodooda cilmi nafsiyeedku way fiicantahay oo tayadoodu waxay u muuqataa inay ka sarreyso barta. Halkii ay ka heli lahaayeen xulashada ugu weyn ee cilmu-nafsiga waxay diiradda saaraan akhristayaasha cilmu-nafsiga ee bixiya aqrinta saxda ah ee daacadnimada ah taas oo noo sheegaysa inay si aad ah isugu dayayaan inay kasbadaan ganacsigaaga halkii ay iskudayaan inay si dhakhso leh u sameeyaan. Sababtaas awgeed waxay sameeyeen aasaas macaamiil aad u daacad ah tan iyo markii ay bilaabeen 2008. Qiimahooda hordhaca ah ee kaliya $ 0.19 / min waa mid aan kaamil ahayn shabakad kastoo cilmi nafsi ah oo aan dib u eegnay, waana heshiis la yaab leh. In kasta oo websaydhkoodu aad u fududahay in la isticmaalo oo la siiyo macmiil wanaagsan oo loogu talagalay macaamiisha waan ka niyad jabnay inaysan haysan lacag celin dammaanad ama lambarka taleefanka adeegga macaamiisha waad wici kartaa haddaadan qancin.
Dib-u-eegista Mareegaha ee LifeReader >>
Source The psychic Source ayaa lagu qiimeeyay shabakadeena maskaxda ee ugu sareysa sababtoo ah maskaxdooda xun, adeega macaamiisha oo aad u wanaagsan, iyo xulasho ballaadhan oo nafsiyadeed oo leh hadiyado kala duwan. Ilaha maskaxda ayaa la aasaasay 1989, ku dhowaad 5 sano ka hor internetka. Kumanaan macaamiish ayaa dooranaya maskaxda ee joogta maskaxda ee maalin walba. Waxay ku faanaan ku qanacsanaanta macaamilka iyo qiimaha la awoodi karo.
Dib-u-eegida Websaydhka PsychicSource >>
Keen wuxuu ka mid ahaa shabakadaha ugu horreeya ee maanka ku xeel dheer internetka, waana ilaa hadda shabakadda ugu weyn ee maanka. Waxay leeyihiin cilmu-nafsiga inta badan laga heli karo meel kasta. Sababtoo ah ma haystaan ​​geedi socod baaritaan ee la-taliyayaasha waxay soo jiitaan inta ugu badan ee maskaxda. Maskaxda cilminafsiga ee Keen ayaa sameyn kara akhrinta maskaxda ee akhrinta ama akhrinta sheekaysiga, ilaa inta lataliyaha aad dooratay uu bixinayo. Waxaan runtii jeclaanay soo-celinta wicitaanka ee Keen isticmaalo. Haddii cilmi nafsiga aad rabto inaad la hadasho aan la heli karin Keen.com si toos ah ayey kuu soo laaban doontaa isla marka ay diyaar yihiin. Xulashada weyn ee cilmu-nafsiga, iyo tikniyoolajiyada horumarsan runti waxay Keen.com ka dhigeysaa mid weyn, laakiin maqnaanshaha nooc kasta oo baaritaan ama hannaan shahaado ah oo cilmi nafsi ahaaneed waxay naga dhigaysaa walaac yar.
Dib u eegida Websaydhka Keen >>
Nadaamka Hollywood waa shabakad cusub oo cusub oo sanadki hore furay. Hadafkoodu waa inay lahaadaan cilmi-nafsiga ugu caansan ee dalka ku yaal shabakadooda. Waa inaan sheegaa inay ujeeddadaas yihiin, hase yeeshee, ma aha qof kasta oo maskaxeed oo shabakadooda ku caan ah. Kala doorashadooda maskaxiyan way ka yaryihiin, laakiin dhammaantood waa kuwo aad u wanaagsan. Waxay bixiyaan telefoonada iyo aqriska sheeko labadaba, sicirkooduna waxay si macquul ah u tixgeliyaan dadka tayada leh ee halkaas ka shaqeeya.
Dib u eegista HollywoodPsychics >>
Helitaanka maskaxdu waa shebekad maskaxda ku haysa, laakiin ma bixiyaan wax astaamo ah. Helista maskaxda waxay ahayd shabakada kaliya ee maskaxda ee aan dib u eegis ku sameeyneyno oo aqrinaya kamaradaha aqrinta webka, taas oo ah mid gaar u ah in yar oo la yiraahdo Shabakada waxaa leh milkiye caan ah oo la yiraahdo DougC. DougC shaqsiyan waxay eegaysaa maskax kasta kahor inta aan loo ogalaan inay lashaqeeyaan. Marka xigta isha cilmunafsiga waxay leeyihiin hawsha ugu wanaagsan ee baarista.
Dib-u-eegista Websaydhka Cilmi-nafsiga ee Maskaxda >>
Kasamba waxay gooni isu dhigtaa iyada oo ku fiicnaata akhrinta ku saleysan sheekaysiga. Dhawaan, xulashada cilmu-nafsiga waxay bilaabeen inay bixiyaan akhrinta taleefanka, si kastaba ha noqotee, maahan dhammaan cilmu-nafsiga ku jira shabakadda inay bixiyaan akhrinta taleefanka. Kasamba waxay gooni isu dhigtaa iyada oo ku takhasustay akhrinta sheekaysiga ku dhisan, waana kuwa ugu fiican. Kasamba wuxuu horey u ahaan jiray Shaqsi toos ah. Kasamba waxaa loo aasaasay 1995 oo ah goob dadku ay talo kaga helaan khabiiro ku saabsan maadooyin badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin sharciga, dhaqaalaha, iyo xitaa cilmi nafsiga. Dhawaan Live Qofka wuxuu duubay astaanta Kasamba hadda waa shabakad rasmi ah oo maanka ku haysa! Waxaan ogaanay akhrinta ku saleysan sheekaysiga inay fiicneyd maxaa yeelay waxay keydin jireen dhamaan sheekaysigaaga, sidaa darteed marwalba waad laaban kartaa oo waad aqrin kartaa waxay yiraahdeen waqti kasta oo aad rabto.
Dib-u-eegista Websaydhka Kasamba >>
Sida Loo Sheego Haddii Maskaxdaada Ay Khaldantahay ama Qaadato
Dad badani waxay u jeestaan ​​maskaxiyan si ay uga jawaabaan su'aalaha muhiimka ah ama talooyin inta lagu jiro waqtiyada adag ee nolosha. Hagaajinta weyn waxaa laga raadsan karaa maskaxiyan dhab ah, laakiin way adag tahay in la ogaado in akhristuhu yahay mid sharci ah ama been abuur ah. Waxa ugu fiican ee aad ku sameyn kartid xaalad sidan oo kale ah ayaa adiga wax baraysa si ay u sahlanaato in la ogaado calaamadaha digniinta ee fanaaniinta.
Weydiinta Su'aalaha Calaasyada ee Maskaxda ah
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in maskaxiyan qadarin leh uu xogteeda ka helayo ilo dhab ah, sidaa darteed macluumaadka ayaa noqon doona mid gaar ah. Akhristaha been abuurka ah ayaa keli ah, waxayna ku weydiin doonaan su'aal aan caddayn marka aad isku deyeyso inaad ku qaaddo macluumaadka dhabta ah.
Tusaale ahaan, maskax-xumo daacad ah ayaa laga yiraahdaa wax la mid ah, "Waa kuma ninka leh magaca R?" Fursadaha ayaa ah, dadka intooda badani waxay leeyihiin lab iyaga oo ka tirsan qoyskooda iyagoo leh magac ka bilaabma warqadda R.
Qofka maskaxda ku hadla ayaa odhanaya, "Waxaan halkan ku leeyahay magaca Robert oo ka soo gudbay wadno xanuun" Macluumaadku wuxuu noqon doonaa mid dhab ah oo qaas ah oo inta badan, waxaad ku ogaan doontaa in macluumaadkaas si deg deg ah. Tusaale ahaan:
Caqabada Hantida: "Yaa ahaa ragga u dhintay si aad u yar, ama qaab fara badan?"
Maskaxda dhabta ah: "Waxaan haystaa nin dhallinyaro ah oo ku dhacay shil baabuur."
Caqabada Hantida: "Miyuu jiraa jacayl jacayl ah noloshaada oo aadan dareensanayn inaad 100 ka heshay%?"
Maskaxda dhabta ah: "Qofka aad la joogtay wakhti dheer ma aha inuu ku soo laabto jacaylkaaga sida aad doonayso ama u qalanto. Maxay ku hayaan qofkan dib u celi inay cabsida ka go'an tahay oo aad u baahan tahay inaad go'aansato marka ay ku filan tahay ku filan. "
Waxaa jira waqtiyo ay shakhsiyaadka dhab ahaantii rajeynayaan fariin ama hagid. Waxay ku rajo weyn yahiin in ay noqdaan bartilmaameed fudud oo loogu talagalay akhristayaasha cilminafsiyeed ee aan caqli-gal ahayn oo sheeganaya in ay yihiin kuwo dhab ah. Si kastaba ha noqotee, markaad la hadlaysid maskaxda ugu fiican, waxay badanaa soo bandhigi doonaan macluumaadka hela jawaab degdeg ah oo xoog leh oo laga helo macaamiishooda. Taasina waa sababta oo ah macluumaadka guriga ku dhuftey oo shakhsigu uu og yahay in macluumaadka uu u yahay iyaga.
Ma dhici karto mar kasta oo aad la hadasho ruux maskaxeed, laakiin waa muhiim inaad barato inaad ku kalsoonaatid shucuurtaada iyo dareenka marka ay timaado macluumaadka laga helay akhrinta. Haddii aad si toos ah uga dareentid macluumaadka, sida haddii aysan adiga ahayn, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bixiso taxadar dheeraad ah oo raadso calaamadaha digniinta.
Lacagtii ama Xayawaanka
Haddii akhristayaashu kuu sheegaan in ay jiraan wax xun oo aad ku dhejisey, ama ubad loo baahan yahay si loo jebiyo tamarta taban ee ku hareeraysan, waxay u badan tahay inay been abuur yihiin. Khiyaamadani waxay cabsi gelin doonaan macaamiishooda iyaga oo marka hore u sheegaya in habaartu ay sabab u tahay xanuunka iyo dhibaatooyinka kale ee ay qabeen dhawaan. Kadibna waxay u soo bandhigi doonaan in ay ka saaraan haba yaraatee in ay sameeyaan qaar ka mid ah cibaadada qadiimiga ah, waxayna ku dalacayaan lacag ay ku sameeyaan.
Tani waa calaamad hubaal ah oo ku saabsan macaamilka maskaxda oo isku dayaya in ay macaamiisha ka cabsiiyaan in ay bixiyaan kaadhka habaaridda. Nasiib daro, dad badan ayaa ku dhacaya sababtoo ah inkaartu waxay u muuqataa hab weyn oo lagu sharxi karo dhibaatooyinka nolosha ee ay la macaamilayaan iyo in aanay rumaysan inay u qalmaan. Nasiib darro, maaha mid fudud sida lacag bixinta dhowr boqol oo doolar si looga saaro habaar. Marnaba ha rumeysanin "maskaxiyan" taas oo kuu sheegaysa arrintan.
Waxyaabo kale oo weyn oo kaa caawin doona inaad ogaato in ruuxa maskaxiyan yahay mid sharaf leh Soodhaweynta Maqalka ee internetka wuxuu internetka ku eegayaa dib u eegista iyo marqaatiyada. Macaamiisha la soo dhaafay oo khibrad leh ama khibrad u leh laxiriira maskaxiyan gaar ah waxay u badan tahay inay ka hadlaan. Dib u eegista akhrinta iyo marqaatiyaalka ayaa kaa caawin kara inaad ogaato in nafsaddu tahay mid waxtar u leh macaamiisha kale iyo inay rumaysan yihiin in qofkaasi yahay mid sharci ah ama aan ahayn.
Tani waxay noqon kartaa qiyaas aad u weyn marka ay timaado garsoorka iyo in kale maaha in maskaxdu run tahay. Xitaa maskaxiyaadka ugu sarreeya ma aha inay had iyo jeer aqbalaan ama ay la shaqeeyaan macaamiisha iskaashiga, sidaas darteed waxaa suurtagal ah in akhristayaasha aad u fiican ay ku yeeshaan dib u eegis aan halkan iyo meeshaasba, laakiin kuwa leh faallooyin badan oo xun waa in si dhow loo eegaa.
Markaad barato inaad ogaato calaamadaha digniintaas, waxaad badbaadin kartaa naftaada oo aad ku qarashgareyso lacagtaada aadka u shaqeysay ee khadka internetka ah. Nasiib darro waxay hubineysaa in dhab ahaantii, nafsiyaadka daryeela ay jiraan kuwo dhab ahaantii doonaya inay gudbaan farriimo iyo hanuunin ay ka heli karaan aduunka, dhinaca kale ama ilaha dheeraadka ah.
Waa maxay Talaabada xigta?
Haddii aad raadineyso akhris maskaxeed oo sharci ah, waxaad isticmaashaa oo keliya shirkadaha qiyamka ah sida saddexda shabakada maskaxda ee aan kor ku taxnay (Weydii, Ilaha Maskaxda, Kasamba iyo kuwa kale.). Saddexda shirkadood oo dhan waxay leeyihiin xulayaal badan oo la taliyayaal ah oo ka kala dooranaya, qof kasta oo akhristaha ah waxaa la mariyaa baaritaan adag iyo baaritaan si loo hubiyo inay dhab ahaantii dhabta yihiin oo ay leeyihiin awood dhab ah.
Is-beddelka Isku-xirka Maskaxda
Bogagga Xirfadaha maskaxda;
kaararka akhrinta bilaashka ah
rasiidhada akhriska maskaxda
kuubannada tarot maskaxda
rasiidhada cilmi nafsiga
rasiidhada xiisaha leh
rasiidhada isha maskaxda
rasiidhada cilmi nafsiga ee California
rasiidhada xarunta maskaxda
cilmi nafsiga la kulma kuubannada